Fonzarelli NKD – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 12 kW (16.1 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
NKD သည်သြစတြေးလျမှလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ Fonzarelli မှလျှပ်စစ် moped ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတီဗွီမှ Happy Days မှဇာတ်ကောင် Fonzie မှလှုံ့ဆော်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ credo သည် “ Bespoke styling. Amped up performance. And most importantly, zero emissions” ။
Fonzarelli NKD သည်Australiaစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်ထပ်အားကစား၊
Moped တွင် ၉၆၆ ဝပ်ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာတစ်ခုရှိပြီးအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း ၁၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ moped တွင် 56 Nm torque ရှိပြီး ၅ စက္ကန့်အတွင်း 0-100 km / h အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
အဆိုပါ moped သည် ၁၂၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ Lithium ဘက်ထရီပါရှိသည်။ ၈၀% ကောက်ခံမှုအတွက် ၁ နာရီဖြစ်သည်။
moped ကိုမည်သည့်အရောင်ဖြင့်မဆိုရရှိနိုင်ပြီး FonzLab မှကိုယ်ပိုင် ပြုလုပ်နိုင်သည် ။